असोज १४, सिन्धुपाल्चोक । हेलम्बु गाउँपालिका–४ का युवाहरुले आफ्नै ठाउँमा रू. ५ करोड लगानी गरेर कृषि फर्म सञ्चालन गरेका छन् । १० जना युवाहरु मिलेर २०० रोपनी क्षेत्रफलमा सञ्चालन गरिएको फर्ममा अहिले च्याउ उत्पादन भइरहेको छ ।
विग एग्रिकल्चर प्रालि मार्फत कन्ये च्याउ खेति गरिरहेको उनीहरुले अहिले दैनिक १ हजार ५०० केजीसम्म च्याउ उत्पादन गरी बजारमा बेचिरहेका छन् । फर्ममा उत्पादन भएको च्याउ काठमाडौंको होटल र सुपरमार्केटहरुमा विक्री भइरहेको सञ्चालक विनोद लामिछानेले बताए ।
‘प्रतिकिलो रू. १८० देखि २०० सम्ममा विक्री भइरहेको छ’, लामिछानेले भने ‘बजारमा च्याउको माग बढिरहेको छ, हामीले उत्पादन थप्ने सोच बनाइरहेका छौं ।’ च्याउ विक्रीबाट दैनिक १ लाख ५० हजारभन्दा बढी आम्दानी हुने गरेको उनले बताए । ‘सबै खर्च कटाएर दैनिक १ लाख जोगिन्छ’, उनले भने ।
दैनिक ४०० बल नयाँ च्याउ राख्ने गरेका उनीहरुले चक्रिय प्रणालीमा हरेक दिन च्याउ राख्ने र हरेक दिन पुरानो बल फ्याक्ने समेत गरेका छन् । च्याउको लागि आवश्यक बीउ पनि उनीहरु आफ्नै प्रयोगशालामा उत्पादन गर्छन् ।
दुई जना प्राविधिकले आफूलाई चाहिने बीउ उत्पादनसँगै बाहिरबाट बीउको माग भएमा विक्री समेत गर्दै आएका छन् । उनीहरुले अन्य किसानहरुले चाहेमा बिउ, प्रविधि र बजार समेत आफैले दिने गरेको प्राविधिक सुस्मीता लामिछानेले बताइन् ।
फर्ममा च्याउसँगै हरियो तरकारी र फलफुल खेति पनि गरिएको छ । पशुपंक्षी पालनको लागि पनि संरचना निर्माण गरिरहेका छन् । तीन वर्ष अघि रोपेको कागतीले राम्रो उत्पादन दिएपछि उनीहरु यो वर्ष ९ हजार बोट कागती रोपिसकेका छन् ।
एक १७० रोपनी जग्गामा कागतीसँगै सुन्तला, एभोकाडो लगायतका फलपूmलका विरुवा समेत लगाइएको छ । तीन रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको एउटै टनेलमा विभिन्न जातको हरियो तरकारी लगाएको फर्म सञ्चालक लामिछानेले बताए ।
फर्म लगानिकर्ता १० जना नियमित कृषि कर्ममा खट्ने गरेका छन् । उनीहरु पालैपालो आ–आफ्नो सीप अनुसारको काम गर्दै आएका छन् । त्यसका अलवा फर्ममा २५ जनाले नियमित रोजगारी पाइरहेका छन् । ‘च्याउमा १५ जना र तरकारी खेती, फलफुल खेती, निर्माणाधिन पशुपंक्षी पालनतर्फ १० जना कर्मचारी छन्’, लामिछानेले भने ‘हामीसहित ३५ जना फर्मसँग निर्भर छौं ।’
उनीहरुको फर्मलाई रिसर्च सेण्टर समेत बनाउने योजना छ । यसै अनुसार पूर्वाधारको काम भइरहेको छ । ‘हामी आधुनिक कृषि प्रणालीलाई अबलम्बन गरी रिसर्च सेण्टरको रुपमा विकास गर्ने पूर्व तयारीमा जुटेका छौं’, लामिछानेले भने ‘हामीसँग प्रशस्त जग्गा पनि छ, भौगोलिक रुपमा पनि यो ठाउँलाई कृषि रिसर्च सेण्टर बनाउन उपयुक्त छ ।’ रिसर्च सेण्टर सञ्चालन भए कृषि अध्ययन गरिरहेका आसपासका विद्यार्थीहरुलाई प्रयोगशालाको सुविधा हुने उनले बताए ।
फर्मलाई स्तरोन्नति गर्न उनीहरुले सनराइज बैंक काठमाडौंबाट ५ प्रतिशत व्याजदरको २ करोड ५० लाख कृषि सहुलियत कर्जा लिएका छन् । त्यस्तै उनीहरुले बागमती प्रदेशको कृषि निर्देशनालयबाट ९४ लाख र कृषि ज्ञान केन्द्र काभ्रेबाट रू. १३ लाख अनुदान सहयोग समेत लिएका छन् ।
कोरोना महामारीपछि बेरोजगार बन्न पुगेका युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने हो भने रोजगारीको सिर्जना हुने र अर्थतन्त्र पनि मजबुद हुने लामिछाने बताउँछन् ।
सरकारले कृषि कानून नै ल्याएर युवालाई कृषितर्फ आकर्षित गर्न आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा कृषि र कृषकको निश्चीत परिभाषा नै छैन,’ उनले भने ‘कृषि कानून बनाएर निश्चित परिभाषासँगै अनुदान तथा बजारको समेत मापदण्ड बनाइनुपर्छ ।’